गम्भीर प्रश्न ! 02 र 20 ले जुनसुकै पाइलट सजिलै झुक्किन सक्छन्, किन राखियो त्यस्तो नम्बर ? - Enepali Online
Previous Post Previous post: श्रीमान र मुटुको टुक्रा छोरी गुमाएकी बंगलादेशी युवती एन्नीको चित्कार,स्वर्ग जस्तो देश घुम्न आउदा नर्क बनिदिन्छ भन्ने के थाहा (भिडियो सहित)
Next Post Next post: बंगला बिमान जलिरहँदा आगोको मुस्लो छेऊमै यस्तो देखियो । क्यामरामा कैद भएको यो दृश्यले सबैको होस उड्यो । यो दृश्यले तपाईलाई पनि सोच्न बाध्य बनाउनेछ । भिडियो सहित